In Mobile Apps, In Tips, In Tricks
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်အခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ Android Device (မည်သည့် Android Phone/Tablet) မှာမဆို Key တွေကို တွဲနှိပ်စရာမလိုပဲ boot လုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမသိခင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် တော်တော်များများက မိမိတို့ရဲ့ Device ကို Bootloader, Recovery ၀င်ချင်ရင် ပါဝါပိတ်၊ ဓါတ်ခဲဖြုတ်၊ ၅-၁၀ စက္ကန့်စောင့်၊ ဓါတ်ခဲပြန်တပ်၊ Power Key + Volume Down Key (or) Volume Up Key တွေတွဲနှိပ်နဲ့ တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒါတွေမလိုတော့ဘဲ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါပြီ။ အောက်ကအဆင့်အတိုင်းသာ လုပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်. .မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်း/Tablet က Root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
၁။ အရင်ဆုံး ဒါလေး (Quick Boot) ကိုဒေါင်းပါ။
၂။ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်း/Tablet ထဲကို Install လုပ်ပါ။
၃။ ပြီးရင် App လေးကို run ပြီး မိမိတို့အလိုရှိသလို အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
0 comments ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်.....
5 comments ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်.....
2 comments ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်.....
In Gmail, In Software
မိမိတို့အသုံးပြုနေကြတဲ့ Gmail ကို Web Brower မလိုပဲ ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း တို့အပြင် ၀င်လာသမျှ မေးလ်တွေကို အချိန်နှင့်အမျှအသိပေးနေမယ့် Gmail Nofifier Pro လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုဒ်မှာပဲ သွားရောက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုပါရစေ။ Screenshot တွေကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အသုံးပြုပုံတွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
အသုံးပြုလိုသူများ အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် WinRar ကိုဖြည်ပြီး Gmail Notifier Pro ကို install လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အင်စတောမလုပ်ခင် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို ဖြုတ်ထားဖို့ လိုပါတယ် (အထူးသတိပြုရန်)။ အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို run လိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့ Main Window ပေါ်လာတဲ့အခါ Menu Tab ကိုသွားပါ။ Menu Tab အောက်က Registration ကိုကလစ်လုပ်ပါ။ ဖြည့်စရာ Name, Mail, Key ဆိုပြီး Box ၃ ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကို ဖြည့်ဖို့အတွက် စောစောက ဒေါင်းလုပ်ယူထားတဲ့အထဲက Keygen ဖိုဒါထဲမှာပါတဲ့ keygen ကို run ပါ။ နှစ်သက်ရာ အမည်နဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်ပြီး Generate လုပ်လိုက်ပါ။ Key ရလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကရလာတဲ့ အမည်၊ အီးမေးလ်နဲ့ ကီးတွေအတိုင်း registration မှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ register လုပ်ပြီးသား Gmail Notifier Pro လေးကိုအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ။ အကယ်၍ အဆင်မပြေတာလေးများရှိပါက C-box / Comment မှာမေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ..။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ...
3 comments ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်.....
In Data Recovery, In Software, In Utilities Software
Wondershare ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်း Data Recovery လေးကို ရှာဖွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မိမိတို့ရဲ PC, USB drive, external hard drive, mobile phone, digital camera, iPod, MP3/ MP4 player တွေနဲ့ အခြား storage device တွေကနေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်တဲ့ Tools လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ.။ အဲဒီမှာ ပုံတွေနဲ့အတူရှင်းပြထားပါတယ်။
အသုံးပြုဖို့အတွက် အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါ။ WinRar ကိုဖြည်ပြီး အထဲမှာပါတဲ့ ws-datarecovery_full542 ကို install လုပ်ပါ။ အဲဒီလို အင်စတောလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ တစ်ခုသတိထားရမှာက အကယ်၍ မိမိရဲ့ Drive: C ထဲက Data တွေကို Recovery လုပ်မယ်ဆိုရင် အခြား partition တွေဖြစ်တဲ့ Drive:D, Drive:E ဒါမှမဟုတ် USB Drive တို့မှာ အင်စတောလုပ်ဖို့ သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Browse မှာ အင်စတောလုပ်မယ့် directory ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အင်စတော လုပ်ပြီးရင် software ကို run ပါ။ Text file ထဲမှာပါတဲ့ Licensed E-mail နဲ့ Registration Code တွေကိုဖြည့်ပြီး register လုပ်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...။
1 comments ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်.....
အားလုံးမင်္ဂလာပါ.။ ကျွန်တော် ပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့မှာရှိတဲ့ Nero လေးနဲ့ ဘလော့ဂ် ဘက်ကို ပြန်စလိုက်ရတဲ့ သဘောပါပဲ။ ပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲတမ်းလာရောက်နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်ကိုတော့ သံယောဇဉ်ရှိဆဲပါပဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သာ ဘလော့ဂ်လေးကို ပစ်ထားရတာပါ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း အချိန်ရရင် ရသလို post လေးတွေ တင်သွားမှာပါ..
အခုတော့ မိတ်ဆွေအချို့တောင်းဆိုထားတဲ့ Burning ROM လေးကိုပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
Install မလုပ်ခင် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို ဖြုတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင် Install လုပ်ပါ။ Serial.txt (notepad) မှာတဲ့ serial ကိုသုံးပြီး register လုပ်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ update မလုပ်မိဖို့ပါပဲ..။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
In Software, In Utilities Software
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Tuneup Utilities 2011 က အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ အလိုရှိသူများနဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်လိုသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ကြပါခင်ဗျာ..။ ကီးဂျင်နရေတာလေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..။
In Photo Printing, In Software
အားလုံးမင်္ဂလာပါ..။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က တောင်းဆိုထားလို့ Photo Print Studio လေးကို ရှာဖွေဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ Full version ဖြစ်တဲ့အတွက် Key မလိုပါဘူး။ အကယ်၍ ကီး လိုမယ်ဆိုရင်လည်း သုံးနိုင်အောင် အောက်မှာ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...။
Serials (လိုအပ်မှသာ ဒေါင်းပါ)
3D Driving School ( Version 3.1 )
Blog တွင် Gtalk Badge ထည့်သွင်းခြင်း
Blog တွင် PDF ဖိုင်များအား i-Paper အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း
နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ..
PDF သို့ ပြောင်းချင်လျှင်
Quick Boot ကိုအသုံးပြု၍ Bootloader/ Recovery Mood ...